Umenzi wesisombululo sokukhanyisa - i-Shanghai P & Q Lighting Co., Ltd.
Iimveliso ezisemgangathweni zeP & Q
I-Shanghai P & Q Lighting Co., Ltd. eyasungulwa ngo-2005 ngumenzi wokukhanyisa ngobuchule kwi-die-casting, inaliti yeplastiki kunye nesinyithi. Ikhula ukusuka kwinto encinci iye kwenye enkulu iyeyayo yokuphosa kunye nefektri yomzi-mveliso eHaining inyathelo ngenyathelo. Die umatshini bephosa ukusuka kwiitoni ezingama-200 ~ 800tons. Siyaqhubeka nokutyala imali kwizixhobo ezitsha ukuze sijongane ngempumelelo nomceli mngeni wokuphuculwa okuqhubekayo, kwaye sihlala sibonelela ngezona zisombululo zifanelekileyo kuzo zonke iimfuno kubathengi bethu. I-P & Q ayinayo inaliti yeplastiki kunye nomzi mveliso wesinyithi, kodwa inokubonelela ngenaliti yeplastiki kunye neephepha zentsimbi ngokweemfuno zabathengi.
SIZA INDAWO YOKUPHELA
Ifektri ephethwe yi-P & Q iseHaining, eZhejiang, China. Akukho ngaphantsi kwe-6000 m2. Imveliso esebenza kulawulo lomgangatho we-ISO9001. Kwaye iofisi kunye nomzi mveliso kulawulwa kwinkqubo ye-ERP ukusukela ngo-2019.